လူလေးမျိုး | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » လူလေးမျိုး	12
thihayarzar says: သူကြီး နဲ့ ရွာထဲမှ လူကြီး များ လုပ်ကြပါဦး …. ကျွန်တော်ရဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာစကားများဆိုတဲ့ စာအောက်မှာ ကွန်မန့်ရေးဖို့ ဘောက်တွေ မပါဘူး ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား ။ ဘယ်နားမှာ တောင်းဆိုရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အာကြီး says: comment off ဖြစ်နေလို့ပေါ့ ကိုသီဟရာဇာ ။
မောင်ပေ says: ခင်မင်စွာဖြင့် အကြံဥာဏ်လေး ပေးပါရစေ ကိုသီဟရာဇာရေ
thihayarzar says: ကိုအာကြီးရေ comment off ဆိုတာနားမလည်လို့ဗျာ …. ရှင်းပြပေးပါလားဗျာ …… ဦးပေ ရေ အခုလို ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင်လေးလည်းလေးစားပါတယ်… ကျွန်တော်တရားနာရင်း ရတဲ့အသိလေးကို မသိသေးတဲ့ သူတွေ မေ့နေတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုပြန်အမှတ်ရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပါ .. ဆရာတော်ပြောတာက လူလေးမျိုးရှိတယ်လို့ပဲ ဟောကြားပြသသွားတာပါ ….. ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော် အတွေးလေးတွေပါ …. အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးလို့ ဦးပေ ပြောသလို ပို့စ်တင်ချင်စိတ်က များနေလို့ အမှားတွေများပါသွားခဲ့ရင်ဖြင့် ပြောပြကြပါ .. အားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်
Shar Thet Man says: ကောင်းပါတယ်….
မမ အညာသူ says: ( ၁ ) အမှောင်ထဲကလာပြီး အမှောင်ကိုသွားတယ်
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: ( ၁ ) အမှောင်ထဲကလာပြီး အမှောင်ကိုသွားတယ်
Guest says: ဒါဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်အထဲပါမှန်းမသိဖြစ်ရတယ်ဗျို့။ ဘ၀က လူလတ်တန်းစားလို့ ယူဆရတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မွေးပြီး ဘ၀တစ်လျှောက် ကုသိုလ်တစ်ဝက် ငရဲတစ်ဝက်လုပ်မိခဲ့တယ် ထင်တာပဲ.. ဒါကို မမှောင်တမှောင်ကလာပြီး မလင်းတလင်းကို ပြန်သွားတယ် ခေါ်ရမလားပဲ။ :D
mamanoyar says: အလင်းကလာပြီး အလင်းကိုပြန်သွားတဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်
နွေဦး says: မွေးရာပါ မျက်မမြင်တွေကတော့
snow white says: ဖတ်ရှုသွားပါတယ် အားပေးသွားပါတယ် ။။။
Ko out of... says: ကျွန်တော်ကတော့ အမှောင်နဲ့ အလင်းကို မွေးသေ အတွင်းမှာဘဲ စဉ်းစားတယ်..
- အမှောင်ကိုဥပမာ- မစင်၊ မီးခဲ လို့တင်စားကြည့်မယ်…
- အလင်းကို ဥပမာ ဖယောင်းတိုင်မီး၊ ဓါတ်မီး စသည်ဖြင့် ခေါ်ကြည့်မယ်..
- ဘယ်မိဘ ကမှ သောတာပန်ဆိုတဲ့(အလင်းရောင်)ကို မွေးလာတယ်ဆိုတာမရှိလို့ဘဲ..